Kuhle ukuvuka uzithuntuthe, kusho osephumelele | News24
Kuhle ukuvuka uzithuntuthe, kusho osephumelele
Durban – Ukusabalala kwesithombe sika-Anele George, 25, ezinkundleni zokuxhumana ngemuva kokuthweswa iziqu zeDegree in Education e-University of Pretoria, kwagqamisa ubunzima ingane yomuntu omnyama edlula kubo ngaphambi kokuphumelela.
UGeorge, odabuka eDimbaza, elokishini eliseKing Williams Town uthi impilo ayikaze ibe lula kuye momfowabo, 26, njengoba bebekhuliswa ngumama wabo eyedwa yize ubaba wakhe ayephila.
“Angikhuliswanga ubaba yize ebephila. Ngize ngahlangana naye sengineminyaka engu-20 ubudala. Umama ubedonsa kanzima, sihlala emjondolo,” kuchaza yena.
Uthi uyakhumbula ngomunye unyaka besebancane nomfowabo bephiwa ulofu wesinkwa zonke izinsuku njalo ntambama esikoleni ukuba bagoduke nawo.
“Lokhu kwaqala ukwenzeka ngemuva kokuthi umama eye esikoleni wafike wabeka udaba lwethu kothisha. Leso sinkwa kwakuba yiyonanto esasilala siyidlile.
OLUNYE UDABA: Wethweswe iziqu obedla iwunga
“Ngikhule ngazi nje ukuthi ngisho umfaniswano wesikole ngiwunikelelwa yilabo abathintekayo uma bebona isimo sami,” esho enanela ngokuthi umama wakhe wayebamba amatoho emizini yabantu ukuze balale bedlile. “Kwesinye isikhathi babengamholeli, kepha bamnikeze ukudla khona sizolala sidlule.”
Uthi impilo yaqhubeka yaba nzima waze waqeda umatikuletsheni ngo-2011 ngemuva kokuwufeyila ngo-2010.
“Nganquma ukuya eGoli ngemuva kokuphasa umatikuletsheni ngizitshela ukuthi ngiyozama amathuba. Kwafike kwamnyama kakhulu nakhona ngoba ngagcina sengisebenza e-KFC ukuze ngizokwazi ukungena enyuvesi, ngabe sengithola umfundaze sengingaphakathi,” kuqhuba yena uGeorge.
Uthi kwamthatha iminyaka emine ukuphothula iDegree yakhe wase eba ngowokuqala ngqa emndenini wakhe ukufinyelela kuleli zinga lemfundo.
“Ngikhuluma nawe nje manje ngiwuthisha ofundisa iMaths ePhillip Mtywaku Senior Secondary School, ePeelton, e-Eastern Cape ngemuva kokuqashwa ngokugcwele ngoMashi nonyaka,” esho.
Uphetha ngokuthi ayikho into ongeke uyenze uma unentshisekelo: “Uma kwenzeka uhluleka okokuqala, ungadikibali”.